Bogga ugu weyn 10ka hantiile ee ugu mushaarka badan USA | Dawladaha Ugu Wanaagsan Hantiilayaasha
Ganacsiga dhulku ma aha mid joogto ah oo haddii aad ka dhigto ishaada muhiimka ah ee nolosha; waa inay jirtaa baaritaan shaqsiyeed oo ku saabsan qaababka cusub iyo koorsada suuqa guryuhu ku socdo. Gaar ahaan, gobolka ugu wanaagsan ee inta badan si deeqsinimo leh u magdhaba xirfadlayaasha guryaha.
Sidan, wax kasta oo lacag ah oo aad ku bixisid sidii xirfadle hanti ma guurto ah ee Mareykanka ayaa gabi ahaanba ku tiirsan suuqa iyo meesha aad joogto Mareykanka.
Dhanka kale, maqaalkan wuxuu diiradda saari doonaa Hantiilayaasha ugu Mushaarka Badan USA, marka lagu daro, Dawladaha ugu Fiican Realtors.
Maxaad U Noqonaysaa Wakiil Guriyeed?
Ku shaqaynta sidii hantiile waxay la socotaa tan xorriyadda beddesha. Inaad ka tagto macaamiisha oo aad u tagto qoysas kala duwan, intaad fursad u hesho inaad la xiriirto rucubyo dad ah, adigu naftaada u shaqayso oo aad ka mahadnaqdo dhammaystirka la socda caawinta iibsadaha iyo baayacmushtariyaasha si ay u sii wadaan mid ka mid ah marxaladaha muhiimka ah ee nolosha.
Lacag caddaan ah ayaa sidoo kale la aqbali karaa. Warbixin dhowaan la sameeyay ayaa muujineysa in magdhawga caadiga ah ee wakiilka guryaha la siiyo uu ku dhow yahay $ 48,930 sanadkii. Tani waa sida ay muujisay Xafiiska Tirakoobka Shaqaalaha Mareykanka.
Hantiilayaasha leh qaybo dheeri ah oo tababar, waayo -aragnimo, iyo shahaadooyin ah ayaa sameeya dakhli ka fiican kan mushaharka caadiga ah ee xirfadlayaasha guryaha lagu yaqaan.
Inaad naftaada u xulato takhasuskan waa mid fudud marka la barbardhigo siyaabaha kale ee xirfadda. Wareeggu waa degdeg, jeebka oo si xiiso leh, uma baahnid inaad ku dhibto tacliinta sare.
Adigoo ah wakiil hanti ma-guurto ah, dakhligaagu wuxuu runtii kaa dhigi karaa mid ka mid ah hantiilayaasha ugu mushaarka badan USA.
Waa Maxay Tallaabooyinka Lagu Noqdo Mulkiilaha Mareykanka?
Haddii aad u baahan tahay inaad noqoto hantiile, waxaa lagaa doonayaa shuruud. Ka fikir mala awaalka hoose ee lacag caddaan ah iyo waqti, labada shirkadood way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran meesha aad ka hesho oggolaanshahaaga.
Si kastaba ha noqotee, shuruudaha gaarka ah way ku kala duwan yihiin hal gobol ilaa gobol kale, hoosta waxaa ku yaal dulmar guud oo ku saabsan sida loogu noqdo hantiile gudaha Mareykanka.
Tallaabada 1: Baadh Shuruudaha Gobolkaaga
Qiimaha La Qiimeeyay: Bilaash
Ma jiro oggolaansho dhul dadweyne oo u gudubta adeegsiga guud, markaa waa inaad buuxisaa shuruudaha oggolaanshaha gaarka ah ee gobolkaaga.
Meesha ugu habboon ee lagu bilaabi karo imtixaankaaga ayaa ah goobta xafiiska dhulalka ee gobolkaaga, kaas oo aad ku ogaan karto adiga oo fiirinaya shabakadda ama booqashada ururka maamulka ee Ururka Sharciyeynta Shatiyada Guryaha (ARELLO).
Inta badan, gobol kasta wuxuu si cad u tilmaamayaa inaad bixisay;
Shuruudaha waxbarashada (sida shahaadada dugsiga sare ama GED)
Koorsooyinka isqorista hore iyo shuruudaha diiwaangelinta kadib
Imtixaannada imtixaanka iyo u qalmidda
Habka codsiga iyo kharashyada
Xaqiijinta asalka iyo faraha
Siyaabaha suurtagalka ah ee lagu heli karo kaadirka xiga ee ruqsadda
Ka warbixinta taariikhda dambiyada
Dhowr gobol oo ku yaal Mareykanka ayaa leh is -weydaarsi shati si siman halkaas oo aadan u baahnayn inaad ka welwesho helitaanka liisan cusub ee gobol cusub.
Tusaale ahaan, NY waxay leedahay is -weydaarsiga ruqsad sida sagaal gobol oo kale sida; Arkansas, Colorado, Connecticut, Georgia, Massachusetts, Mississippi, Oklahoma, Pennsylvania, iyo West Virginia.
Tallaabada 2: Isqor Koorso Ruqsad-qaadasho Hore
Meel kasta oo aad ku nooshahay, waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso koorso shatiyeyn hore ah mid kasta oo ka mid ah dugsiyada shati siinta hantida maguurtada ah ee la aqoonsan yahay ka hor intaadan u fariisan imtixaanka liisanka hantida ma guurtada ah oo leh tirada saacadaha kala duwan ee gobolka.
Kaalifoorniya gudaheeda, ardaydu waxay qaadanayaan ilaa 135 saacadood si ay u qaataan illaa saddex fasal oo hanti ma guurto ah inta ay joogaan New York iyo Georgia, koorsooyinkan waxay u baahan yihiin ilaa 75 saacadood si loo dhammaystiro.
XIDHIIDHKA: Immisa ayuu qaataa shahaadada koowaad ee jaamacadda ee kalkaalisada?
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo gobolada intooda badan ay ula kulmaan shuruudaha koorsada shati-bixinta ka hor oo ay ka mid yihiin; fasallada onlaynka ah, iskuulada guryaha ee leben-iyo-hoobiye ah, iyo fasallada kulliyadaha yaryar.
Waxa kaliya ee lagaa rabo waa inaad doorato istaraatiijiyada waxbarasho ee adiga kugu habboon. Sidoo kale, waad samayn kartaa cilmi -baaris oo aad qaadan kartaa go'aan xigmad leh markay tahay inay la xiriirto xulashada barnaamij maadaama tayada waxbarista aad hesho ay si weyn u saamayn doonto u -diyaargarowgaaga imtixaanka ruqsadda.
Tani waa mid ka mid ah tillaabooyinka la qaadayo si loo noqdo Hantiilayaasha ugu Mushaarka Badan USA.
Tallaabada 3: U fadhiiso Imtixaanka Shatiga
Macallinkaagu waa inuu kula soo xiriiraa sida loo diiwaangeliyo oo uu imtixaanka isaga bixiyo ama
Imtixaanka ruqsadda ayaa ka kooban laba qaybood; qayb qaran oo ku saabsan dhaqamada guud ee hantida maguurtada ah iyo qayb daboolaysa sharciyada hantida maguurtada ee gobolkaaga.
Sidoo kale, su'aalaha waa la farsameeyaa waxaana lagu soo bandhigaa qaab ikhtiyaarro badan leh oo qayb kasta si madaxbanaan loo dhaliyo. Waa muhiim inaad dhibcaha ka sarreyso celcelis ahaan laakiin haddii aadan sidaas yeelin, waa inaad dib u qaadataa imtixaanka.
Tallaabada 4: Dhaqaajiso Shatigaaga Wakiilka Guryaha
Waxa xigta ee suurtogalka ah in la sameeyo ka dib markaad imtixaanka gasho waa inaad xaqiijiso liisankaaga. Tan waxaad samayn kartaa adiga oo ka codsanaya xafiiska dhulka ee gobolkaaga halkaas oo uu ku mari doono nooc ka mid ah baadhitaanka oo laga dhigi doono mid la heli karo sida waafaqsan Xeerka Shatiga.
Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow inaadan u shaqayn karin sidii hantiile ka hor intaadan ka helin liisankaaga wakaaladda guryaha ee gobolka. Sidaa darteed, waa muhiim inaad sii wadato ilaa aad ka hesho.
Tallaabada 5: Ka fikir inaad noqoto Hantiile
In kasta oo dadku isweydaarsadaan ereyada 'wakiilka guryaha' iyo 'kireeyaha', haddana waxay ula jeedaan waxyaabo kala duwan. In kasta oo labaduba ay haystaan ​​ruqsad ay ku caawiyaan ganacsatada iyo iibsadayaasha si isku mid ah iyada oo loo marayo hab macaamil ganacsi, kireeyuhu waa xubin ka tirsan Ururka Qaranka ee Hantiilayaasha wuxuuna u hoggaansamaa xeerkiisa Anshaxa.
Ururka mulkiilayaasha waa ururka ugu weyn ganacsiga ee Maraykanka oo leh in ka badan hal milyan oo xubnood oo haysta warshadaha guryaha.
Noqoshada mid ayaa kuu furaysa fursado badan oo ay ka mid yihiin;
Xogta suuqa guryaha, cilmi baarista, iyo tirakoobka
Barnaamijyada qiima dhimista waxaa loogu talagalay inay kaa caawiyaan inaad ku guulaysato ganacsiga
Tan, waxaad si fiican ugu qalabeysan tahay inaad ka mid noqoto hantiilayaasha ugu mushaarka badan USA.
Tallaabada 6: Ku biir Dillaalinta Hantida Ma guurtada ah
Hantille ahaan, waxaad ka hoos shaqayn doontaa kormeerka dillaal kaas oo sidoo kale dawladdu ruqsad siisay si uu u kormeero macaamilka hantida maguurtada ah una hubiyo in adiga iyo wakiillada kale ee hantida maguurtada ahi u hoggaansamaan xeerarka.
Sidaa darteed, ma jiri doonto baahi aad ku kasbato mushahar maadaama dillaalku kaliya boqolkiiba ka helo dhammaan macaamilkaaga.
Waa maxay Dakhliga Celceliska Hantiilaha ee Maraykanka?
In kasta oo ay iska caddahay in wakiilka guryaha ee Mareykanka laga yaabo inuusan wax badan qaban sannadka ugu horreeya ee uu ku biirayo xaruntan ganacsi sababta oo ah isku -dayo kala duwan oo la isku dayayo in la sameeyo saldhig macmiil, waa hubaal in waqtiyada dambe , kireeyuhu wuxuu samayn karaa qiyaastii saddex jeer ama xataa afar jeer dakhligoodii hore.
Tan waxaa ugu weyn xukunkii ka yimid gudbinta iyo aqoonta siyaabo kale oo lagu soo jiito maalgashadayaasha.
Tani waxay ka dhigi kartaa inuu ka mid noqdo Realtors -ka ugu Lacagta Badan USA.
XIDHIIDHKA: Sida Loo Codsado Kaarka Cagaaran | Tillaabo-Tallaabo Hagaha
Waagii hore oo aan sidaa u fogeyn, wakiilada guryaha ayaa la ogaaday inay qaataan celcelis ahaan mushahar dhan $ 42,183. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in la xuso in kala duwanaanshaha mushaharkoodu uu kala duwan yahay laakiin uu u dhexeeyo $ 41,208 illaa $ 53,656.
Sideen u Kordhi karaa Dakhligayga Guryaha Ma -guurtada ah?
Waxaa jira dareen ah inaadan ku noolayn meel ku jirta gobolada ugu sarreeya hantiilayaasha ugu mushaarka badan USA laakiin warka wanaagsan ayaa ah inaad isku dayi karto inaad kordhiso dakhligaaga iyadoon loo eegin. Aynu aragno dhowr siyaabood oo aad taas ku samayn karto;
1: Naftaada u samee xayndaab
Ku takhasusay wax ka duwan waxa dadka kale ee warshaduhu sameeyaan waa wax u dulqaadan kara tijaabada waqtiga iyada oo saamayn weyn ku leh dakhligaaga.
Marka, intaad ku dadaalayso inaad istaagto, hubso inaad doorato niche abaalmarin leh haddii ay tahay inaad sameyso.
2: ku adkayso
Waxaa jira aaminaad guud oo ah in waqtiga dheeraadka ah ee aad ku qaadato warshadaha, in dakhligaagu kordho.
Daraasad gaar ah ayaa muujisay in wakiilada hantida maguurtada ah oo sanadkii ugu horeeyey kasbaday qiyaastii $ 19,375 ay sii wadeen inay kasbadaan qiyaastii $ 80,000 muddo 11 sano ah.
3: Hel raadad tayo leh
In kasta oo hantiilayaasha badankoodu aysan ku qanacsanayn ku lug lahaanshaha xeeladaha suuqgeynta qaarkood, haddana waxaa la caddeeyay inay tahay hab wax ku ool ah oo lagu kordhinayo dakhligaaga marka la barbardhigo hantiilayaasha xirfadahoodu yihiin hiwaayadda.
10-ka Dawladood ee Ugu Fiican Realtors-ka Lacag-bixinta ugu badan ku leh USA
Miyaad ku nooshahay gobol ay jiraan dakhli badan oo laga soo wariyay hantiilayaasha? Waa kan liiska meesha aad ka heli karto hantiilayaasha ugu mushaharka badan.
Waxay ku taal xeebta Atlanta ee Mareykanka, Virginia ayaa ugu sarreysa liiska meelaha aad ka heli karto hantiilayaasha ugu mushaharka badan 2022.
Laga soo bilaabo markii ugu dambaysay markii warbixinno laga soo ururiyey Virginia Realtors sannadka 2016, hadda waa waqtiga ugu habboon ee lagu darayo liiska mulkiilayaasha ugu mushaharka badan USA.
Si aad si buuxda ugu dhex gasho xirfaddaada, waxaad u huri kartaa dhowr toddobaad si aad u hesho shahaadooyinka.
Waxaan ku qiyaasnaa dakhliga sannadlaha ah ee wakiilka guryaha ee Virginia inuu noqdo $ 122,813.
Waxay ku taallaa gobolka Dhexe ee Mareykanka, Ohio waxay u muuqataa inay tahay aag aad u ballaaran oo ay ku nool yihiin in ka badan 11.8 milyan oo qof. Tani waa sida laga soo xigtay Wikipedia.
Dhawaan, suuqa guriga iyo hantida ee Ohio waxay la kulantay isbeddel aad u weyn oo markeeda, ka dhigay jeebabka hantiilayaasha Ohio dufan.
Marka, celceliska mushaharka sanadlaha ah ee wakiilka guryaha ka sameeyo Ohio waa qiyaastii $ 101,190.
Sida laga soo xigtay Wikipedia, kani wuxuu ku saabsan yahay gobolka 7-aad ee ugu yar Mareykanka Mareykanka, caasimaddiisana waxaa loo yaqaanaa Boston.
Hantiilayaasha Massachusetts waxay naftooda ka sameeyaan lacag aad u badan oo ay ka helaan meheradda sababtoo ah guryaha iyo guryaha la degay aad bay qaali u yihiin. Markaa, celcelis ahaan, waxaad samayn doontaa dakhli sanadeed qiyaastii ah $ 88,750.
#4. NEW YORK ($ 83,239)
Mar dambe ma ahan warar sheegaya in iyadoo aan loo eegin guryaha ay ku badan yihiin Magaalada New York, maalgashadayaashu wali waxay ku raaxaystaan ​​inay iibsadaan wax badan.
Baadhitaanka hadda socda ayaa muujinaya in ganacsiga hantida maguurtada ahi uu kobcay sannadihii la soo dhaafay oo sidaas oo kale, wuxuu u taagan yahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo dakhli rafcaan oo ku jira hantida maguurtada ah ama mulkiilaha.
XIDHIIDHKA: 15 SHAQO BIXIYA $ 100 SAAC 2022 | LACAG SOON
Waa mid ka mid ah gobolada ugu wanaagsan si loo helo Hantidhawlayaasha ugu Mushaarka Badan USA.
In kasta oo aan la kulmin koboc shaqo oo deg deg ah, Teksas sidoo kale ma ahayn mid laga yaraynayo maaddaama ay jirto xaalad dhaqaale oo xoog leh oo ay leedahay iyo heerar saaxiibtinimo oo aad ka heli karto dhowr guri oo deggen oo aad adigu wici karto.
Tani waxay u ekaan kartaa runtii wax la yaab leh laakiin waxaa jira dhulal badan oo aad ku dhisi karto kuwaas oo aan ku tixraacno afkeenna maxalliga ah 'iibso oo dhis'.
Dakhliga sanadlaha ah ee kireeyaha Texas waa qiyaastii $ 80,833.
#6. COROLINA WAQOOYI
Xaqiiqda ugu xiisaha badan ee ku saabsan NC waa in sanadaha dambe, hawlgab badan ay rabaan inay halkaas degaan. Markaa, suuqa guryaha la awoodi karo ayaa ilaa hadda soo jiitay maal -gashadayaal badan oo ku nool North Carolina.
Waxaad naftaada u dhisi kartaa hanti haddii aad ku hareeraysato hantiilayaal aqoon leh oo aad naftaada ka dhigto waxa aadan waligaa u malayn inay suurtogal tahay markii hore. Celcelis ahaan, kireeyuhu wuxuu qaataa mushahar sanadle ah qiyaastii $ 75, 000.
Taariikhdu waxay sheegaysaa in waqtiga ugu wanaagsan ee lagu maalgelin karo hantida maguurtada ah ee Washington ay tahay xagaaga oo ku beegan inta u dhaxaysa Maarso ilaa Abriil. Laakiin xilliga jiilaalka, qiimaha guryaha ayaa cirka isku shareeraya. Sidaa darteed, taas oo u saamaxaysa hantiilayaasha inay dakhli badan ka sameeyaan ganacsigooda hantida ma guurtada ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira arrimo badan oo saameeya inta uu kireeyuhu ku kasbado dakhli celcelis ahaan laakiin waxa ugu badan waa kartida hantiilahan si uu u iibiyo hantida maguurtada ah.
Xafiiska Tirakoobka Shaqada wuxuu muujinayaa in wakiilka guryaha ee Washington DC uu sanadkii qaato $ 70,000. Tani waa mid aad u weyn haddii aysan hoos u dhicin.
Kani waa gobol kale oo laga helo Realtors -ka ugu mushaarka badan USA.
Asal ahaan, kani waa meesha ugu jaban ee lagu noolaado marka la barbar dhigo dalka intiisa kale. Hore u socoshada, qiimaha hantida maguurtada ah ayaa la filayaa inuu kor u kaco 3.5% iyadoo faa'idada hantiilahu yahay qiyaastii 5.6%.
Marka, celceliska mushaharka mulkiilaha TN wuxuu u dhexeeyaa $ 55,000 - $ 60,000.
Sida muuqata, suuqa hantida maguurtada ah ee CT ayaa aad u liidatay beryahan iyo marka la eego sida baahida baahsan ee guryuhu u ahayd mid aad u daran, awood u yeelashada waxay umuuqataa mid ku adag kuwa doonaya inay iibsadaan.
Xirfadlaha sahaminta wuxuu leeyahay in kireeyaha CT -ga uu kasbado qiyaastii $ 38,580 - $ 45,950.
Bishii Juun 2021, guryaha ku yaal Minnesota way ka sarreeyeen sidii aad hore ugu heli lahayd.
Si kastaba ha ahaatee, celceliska mushaharka mulkiilaha Minnesota wuxuu u dhexeeyaa $ 35,000 - $ 40,000.
In kasta oo aan ku liis-garaynay gobollada leh mulkiilayaasha ugu mushaharka badan Maraykanka, waxaa habboon in la xuso in u-qalmitaankaaga, istaraatijiyadda ganacsiga, iyo shabakadda dadku ay wax badan ka sheegaan inta aad ka kasbato meheraddan.
Si kastaba ha ahaatee, ka faa'idayso marka xilliyadu ay wanaagsan yihiin oo ay ku habboon yihiin in la dhammaystiro.
Shaki kuma jiro in tignoolajiyadu ay horumarisay wax badan oo wada sheekaysiga tooska ahi uu ka mid yahay.
Sidee WhatsApp Lacag U Sameeyaa? Qaabka Dakhliga
App-ka caanka ah ee baraha bulshada ee loo yaqaan WhatsApp ayaa waxaa jecel oo ay isticmaalaan malaayiin qof oo ku nool agagaarka…
10ka Apps ee Nadiifinta ugu Fiican ee ay tahay inaad haysato
Milkiilayaasha taleefannada casriga ah ayaa caado u ah inay ilaaliyaan muuqaalka taleefannadooda casriga ah iyagoo isticmaalaya kiisaska iyo daboolka…
Waa maxay Nidaamka Ammaanku sideese u shaqeeyaa?
Tobankii sano ee la soo dhaafay, tignoolajiyada ka dambeeya nidaamyada amniga guriga ayaa isbedelay. Inta badan nidaamyada amniga hadda waa…